Fomba 15 andefasan'izao rehetra izao hafatra - famantarana tokony hotandremana - Fanahy
Tsy olona mitoka-monina ianao, tapaka hiala amin'ny zava-misy sisa. Ianao dia mifandray amin'izao rehetra izao amin'ny fomba be pitsiny toy ny kofehy vita amin'ny tenanao. Ary amin'ny alàlan'ireto kofehy ireto no ahafahan'ny izao tontolo izao mandefa hafatra ho anao.
Tsy isalasalana fa sendra ny maro amin'izy ireo ianao tamin'ny fiainanao, indraindray tsy tsapanao akory hoe iza izy ireo. Mety ho noheverinao ho sendra azy ireo izy ireo, saingy misy ny vintana mety ho famantarana avy amin'izao rehetra izao natao mba hitarika anao amin'ny lalana iray na hafa.
Ireto misy fomba 15 mety handefasan'izao rehetra izao hafatra aminao.
1. Fanandramana miverimberina
Voamarikao ve ny fotoana toa ilay zavatra mitovy aminao manjo anao isan'andro isan'andro?
Angamba ianao manohy misotro zava-pisotro, manaparitaka ny rantsan-tongotrao, na mamoy ny findainao mifandimby - ny tsirairay amin'ireto zavatra ireto dia mety misy heviny lalina kokoa izay tsy miharihary amin'ny fahitana azy voalohany.
ny saina tsy mahatsiaro tena dia ny anjaranao izay miorim-paka lalina indrindra eo amin'izao rehetra izao midadasika ary misokatra indrindra handray hafatra.
Ary matetika dia ampitaina amin'ny alàlan'ny nofinofy ireo hafatra ireo. Rehefa matory isika vao mihaino ny saintsika tsy mahatsiaro tena mandritra ny fotoana lava mba handraisana ilay hafatra nalefa.
Ny tontolo voajanahary dia manana sambo maro izay ahafahany mandefa ny hafatr'izao rehetra izao, ary tsy misy zava-dehibe noho ny biby.
Ny fahitana miverimberina fihetsiky ny biby na biby manokana dia mety ho mariky ny faniriana tsy tanteraka na ny zavatra ho avy. Ohatra, ny fanamarihana tsy tapaka ny andian'ondry vorona manidina ambony eny amin'ny lanitra dia mety ho famantarana fa mahatsapa ianao fa mila mandeha sy mandositra mandritra ny fotoana fohy.
4. Lamin'ny isa
Na dia mety ho olombelona aza ny isa dia mety ho endrika fifandraisana avy amin'izao rehetra izao. Mila mitandrina amin'ny modely ianao satria ao anatin'ireny no mety hahitana ireo hafatra.
Ny isa miverimberina toy ny 11:11 na isa mifanesy toy ny 1, 2, 3 dia mety mitazona dikanteny miafina izay tokony hataonao fotsiny dia ny famaritana azy ireo.
Tsy isalasalana fa efa niainanao an'io imbetsaka ianao - rehefa mieritreritra olona iray ianao alohan'ny hiantsoana azy, handefasanao hafatra, na hifanena aminao mivantana.
ohatrinona ny lanjan'i john cena
Matetika, izao no famantarana fa eo amin'ny làlana tsara ianao. Fomba an'izao rehetra izao hanamafisana aminao fa mifanaraka tanteraka amin'ny eritreritrao ny ho avy ny eritreritrao. Izao rehetra izao no manome anao 'eny' lehibe hanamafisana fa mandeha amin'ny lalana marina ianao.
6. Very / Mikaroka / mamaky zavatra
Ny fifandraisantsika amin'ireo zavatra ananantsika dia matanjaka isika mahita ny tenantsika sy ny fiainantsika amin'ireo zavatra iarahantsika aminy sy manodidina.
Ka tsy tokony hahagaga raha mahafantatra fa izao tontolo izao dia mety mandefa hafatra amin'ny alàlan'ireto famantarana ireto. Rehefa very zavatra iray isika, mahita zavatra, na mamaky zavatra iray, dia mety hidika zavatra isan-karazany izany.
Ny fahitana zavatra dia matetika natao hampiasa fahatsiarovana ao an-tsainao, raha ny famakiana zavatra kosa dia matetika no atao marika famantarana ilainao avelao ny lasa .
famantarana izay tena te hampiaraka aminao izy
7. Teny / Andian-teny miverimberina
Toy ny hoe rehefa nisy zavatra niainana niverimberina tao anatin'ny fotoana fohy, rehefa mifanena matetika amin'ny teny na andianteny iray mifandimby ianao dia matetika no midika zavatra. Mety ho hafatra tena manokana na zavatra somary misimisy kokoa io, nefa diniho ho toy ny fambara ireo teny ireo.
8. Fanaintainana sy aretina
Ny fanaintainana dia tsy vokatry ny tranga iray manokana foana, ary ny aretina dia tsy voatery hanana loharano miharihary. Na izany aza, tsy fahita matetika fa ireo zavatra roa ireo dia tandindona zavatra hafa amin'ny fiainanao.
Ny toerana misy ny fanaintainana na ny karazana aretina dia mety misy dikany miafina, zavatra iray izay tokony hodinihinao akaiky.
9. Hira / Mozika / Tononkira
Efa nifoha ve ianao ary nisy hira teo an-dohanao teo noho eo? Sa efa nandeha tamin'ny fiainana ianao tampoka nandre mozika iray manokana?
Ny saintsika matetika dia mamorona fifandraisana sarotra eo amin'ny mozika sy ny fihetsem-pontsika. Izao rehetra izao dia afaka mampiasa hira, gadona na tononkira manokana hampitana fampahalalana manan-danja aminao.
Ny toetrandro amin'ny faritra iray dia zavatra iainan'ny olona maro miaraka, koa mety manontany tena ianao hoe ahoana no mety ho hafatra avy amin'izao rehetra izao.
Eny, tsy ny toetr'andro amin'ny ankapobeny no zava-dehibe, fa ny zavatra hitanao ary ny fotoana ahitanao azy. Raha izany dia tapaka ny feon'ny havandrao eo amin'ny varavarankelinao, ny famantarana anao, izany dia famantarana fa mila miala sasatra amin'izay ataonao ianao.
Toy izany koa, raha maniry mafy karazana toetr'andro manokana ianao, dia afaka milaza aminao betsaka momba ny toe-tsainao izany. Raha maniry tadio ianao, ohatra, dia mety hidika izany fa mahatsapa ianao fa mila manasa ireo zava-niseho vao haingana, mba hanadio ny tenanao amin'izany.
11. Fivoriana tsy ampoizina
Efa sendra sendra sendra sendra olona sendra olona sendra olona sendra sendra olana manjo anao ve ianao izao? Mety nanana izany ianao nanapa-kevitra ny hiala amin'ny asanao ho lasa mpampiofana manokana rehefa mifanena amina fety ataon'ny namanao izay nanao zavatra mitovy taona vitsivitsy talohan'izay.
Ity karazana tranga ity dia matetika izao tontolo izao manamafy izay misy na tsy mety ny lalana tokony halehanao (miankina amin'ny torohevitra nomen'ny olon-kafa).
12. Fihetseham-po tsy mandeha amin'ny laoniny
Ny fihetsem-pontsika dia mety ho mpitondra hafatra tena lehibe , fa raha ny fandefasana torolàlana avy amin'izao tontolo izao dia ireo fihetsem-po ireo no toa tsy mifanaraka amin'ny toerany no tena manadanja indrindra.
Ka, ohatra, raha any amin'ny toerana azo antoka ianao, nefa tampoka dia mahatsiaro ho resin'ny tsy fanazavana TAHOTRA ary ny fahatahorana, mety misy antony tsara tokony hitandremana.
13. Teny tsy mahazatra / vaovao
Mety hoe sahirana izao tontolo izao hampita hafatra manokana aminao, ka mety hifidy ny hampiharihary anao amin'ny teny tsy mahazatra, vaovao na vaovao izay mampiato anao amin'ny lalanao.
Rehefa mahita teny tsy fantatrao ny dikany, na mandre teny izay mbola tsy henonao tenenina nandritra ny fotoana ela be, dia mety ho famantarana tokony hijerenao izany.
Ny saintsika dia ho avy hampifandray olona na hetsika sasany amin'ny fofona isan-karazany mandritra ny androm-piainantsika. Mety tsy ho fantatrao fa misy ireo rohy ireo mandra-pahitanao fofona tsy ampoizina izay mamela sary mahery ao an-tsainao.
maninona ry zalahy no miverina afaka volana maromaro
Rehefa sendra ireo fofona tsy mahazatra ianao dia mety ho izao rehetra izao no mampahatsiahy anao zavatra na olona iray izay misy ifandraisany manokana amin'ny toe-javatra iainanao amin'izao fotoana izao.
Ilaina ny mamerina fa ny sainao tsy mahatsiaro tena dia mifanaraka amin'ny hovitrovitra manerantany noho ny eritreritrao. Ka rehefa fantatrao fa ny tsinainao dia mpitondra hafatra mety hojerena akaiky koa dia tokony ho voajanahary izany.
Ny sainao ary zavatra manindry mandry matetika dia maneho ny tenany amin'ny alàlan'ny fahatsapana ao amin'ny tsinainy ary ireo fahatsapana ireo dia vokatry ny saina tsy mahatsiaro tena mavitrika izay mampita hafatra avy any ivelany.
Dingana 7 tokony ho raisinao tanteraka isaky ny mangataka zavatra amin'izao rehetra izao ianao
Ahoana ny fomba hifandraisana sy hiasa amin'ny fitarihana fanahy
Raha fintinina dia tsy tokony tsy hiraharaha ireo 15 mahery ireo ianao famantarana avy amin'izao rehetra izao :
Very / mahita / mamaky zavatra.
Teny sy andianteny miverimberina.
Fanaintainana sy aretina.
Hira / mozika / tononkira.
Fivoriana tsy ampoizina.
Fihetseham-po tsy mandeha amin'ny laoniny.
Teny tsy mahazatra / vaovao.
maninona aho no mahatsapa fa tsy mendrika hotiavina
firy taona i richard williams
mpikomy izay maty tamin'ny 2016
famantarana fa tsy tia anao intsony izy
maninona aho no mampihetsi-po be androany
sarimihetsika eddie deezen sy fandaharana amin'ny fahitalavitra